မပျတ်စီးသေးဘူး – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 17, 2021 Author admin	Comments Off on မပျတ်စီးသေးဘူး
ဦးသောင်းမင်းသည်သက်ပြည့်အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်ကံဆိုးစွာဇနီးဖြစ်သူနှင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကလေးကိုလက်လွှတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသဖြင့်သောင်ပြင်တွင်လွှတ်နေသောခွေးကဲ့သို့ဖြစ် နေသည်။ ထို့ကြောင့်ဦးသောင်းမင်းသည်(—————)မြို့တွင် အိမ် ခန်းငှါး၍တစ်ဦးတည်းနေထိုင်လေတော့သည်။ဦးသောင်း မင်း ကောင်းစားစဉ်တုန်းကဆိုလျှင် ဇာတ်တူသားတောင် မရှောင်တတ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ဘဝတူအိမ်ထောင်သည် များ၏အဓိက အားနည်းချက်ဖြစ်သောငွေကြေးကိစ္စတွင် ကူညီဖြေရှင်းပေးယင်းကာမကိုရယူခဲ့တာချည်းဖြစ်သည်။ ချွင်းချက်တော့ရှိသည်။ငွေကြေးအကူအညီတောင်းခံသူ သည်ရုပ်ရည်ချောမောသူဖြစ်ရမည်။ငယ်ရွယ်ရမည်။အမျိုးသ္မီးတစ်ယောက်တွင်ရှိသင့်သည့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ဖြစ်ရမည်။ ဦးသောင်းမင်းသည်(ဖွန်)လိုင်းတွင် အားသန်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယခုလို တစ်ဦးတည်း လွပ်လွပ်လပ်လပ် နေရ ချိန်တွင် ယခင်ကဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည့် အမျိုးသ္မီးများနှင့်ပြန် လည်ဆက်ဆံမှုရန် ကြိုးပမ်းတော့သည်။
မိမိယနေ့ ဝတ်လာသည့်အင်္ကျီကလည်းလည်ဟိုက်တာ နည်းနည်း များသည်။ အဘကလဲမမြင်ဖူးတာကျနေတာပဲ အနေခက်လာသဖြင့်ယဉ်ယဉ်ပြောမိသည်။ တွေ့ချင်တယ်ဟာ အဘမည်သို့မည်ပုံတွေ့ချင်သည်ကိုယဉ်ယဉ်နားလည်သ ဘောပေါက်ပါသည်။ ယဉ်လဲတွေ့ချင်ပါတယ်အဘရယ်….. အေးကွယ်..တည်းခိုခန်းမှာတော့တွေ့ဖို့မသင့်တော်သလို.. ချောင်းရိုက်တွေအန္တရာယ်ကလဲရှိသေးတယ်.. ဟုတ်တယ်..အဘ..သ္မီး..နေရာရှာကြည့်ပါအုံးမယ်… ထိုကဲ့သို့ထွေရာလေးပါးပြောဆိုကြပြီးနောက်ဖုန်းနံပါတ် ချင်းဖလှယ်ကာလမ်းခွဲခဲ့ကြသည်။ ယဉ်ယဉ်သည်ဘာသာခြားတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်းအယူ မသည်းတတ်သူဖြစ်သည်။ယဉ်ယဉ်၏ဖခင်တီဘီရောဂါ ကုသရန်ငွေလိုသဖြင့်ဦးသောင်းမင်းဆီမှငွေအနည်းငယ် ချေးယူရာမှနှစ်ဦးသားကာမကျူးလွန်ကြသည်အထိရင်း နှီးခဲ့ကြသည်။ယဉ်ယဉ်သည်လူကောင်ညှပ်သော်လည်း ကြီးမားတင်းရင်းနေသည့်ရင်သားအစုံကပုရိသများကို ဖမ်းစားခြင်းပြုနိုင်၏။ခါးမသိမ်တင်သေးသဖြင့်ထိုလှပ သည့်ရင်သားကသာပုရိသတို့သဘောကျဖွယ်ဖြစ်နေ သည်။တိုင်းရင်းသားသွေးနှောသူမျိုးဆက်ကဆင်းသက် လာသောကြောင့်လည်းကလေးတစ်ယောက်မိခင်ဖြစ် လင့်ကစားနို့နှစ်လုံးမှာပျော့တွဲတွဲကျမနေပဲတင်းတင်း ရင်းရင်းရှိလှသည်။လူကောင်သေး၍လားမသိ-အဖုတ်မှာ မို့မို့ဖေါင်းဖေါင်းသေးသေးလေးဖြစ်သည်။နို့နှင့်အဖုတ်ကို တိုင်းရင်းဆေးများလိမ်းသည်ထင်ပါသည်။
နို့နှစ်လုံးတင်း ရင်းနေသကဲ့သို့အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများမှာလည်းအပိုအ လိုမရှိတင်းတင်းလေးဖြစ်နေသည်။ ထင်မှတ်မထားတာတွေဖြစ်တတ်သည်ကလူ့သဘာဝ ပါ။ ကံထမ်းလာသည်ကိုမည်သူမျှမမြင်နိုင်ကြချေ။ယဉ်ယဉ်နှင့် တွေ့ဆုံရန်အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သောငွေကြေးကိစ္စနှင့်နေ ရာကိစ္စသည်ဦးသောင်းမင်း သန်းထီကြီးပေါက်သောအခါ မြင်းကိုချိုတပ်ပေးသကဲ့သို့ဖြစ်ချေတော့မည်။ ဦးသောင်းမင်းသည်သိန်း(၅၀၀၀)ကျ ပ်ဆုကြီးပေါက် သည်ကိုမည်သူ့ကိုမျှအသိမပေး..လျှုိ့ဝှက်ထားသည်။ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်တစ်ခုတွင်..တိုက်ပုလေးတစ်လုံးဝယ် လိုက်သည်။ခြံတံခါးကိုအဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့်..ဖွင့်/ပိတ်၍ရ အောင်ပြုလုပ်သည်။မီးပျက်လျှင်..လူကိုယ်တိုင်..ဖွင့်/ပိတ် ရသည်။အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းကို..အသံလုံအခန်းအဖြင့်..ပြုပြင် ဖန်တီးယူသည်။အစစအရာရာအဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါ ……… (ဖုန်း)ခေါ်သံကြောင့်..ယဉ်ယဉ်..မီးပူတိုက်နေရာမှ..ခေတ္တ နားကာ..ဖုန်းကိုင်ကာ.. အမည်ကိုကြည့်လိုက်ပြီး.. ဟလို….အဘ… ဟု..ထူးလိုက်၏။
ယဉ်ယဉ်..ရေ…ငါအလုပ်တစ်ခုရတယ်ဟ.. ဘာ..အလုပ်လဲ..ဟင်..အဘ… အိမ်စောင့်ပေးရတဲ့အလုပ်ပဲ..ငါ့ဆရာသ္မ္မားတစ်ယောက် နိုင်ငံခြားသွားနေတုန်း..သူ့အိမ်ကို..စောင့်ရှောက်ပေးရ မှာလေ..လစာလဲပေးတယ်ဟ… အဘ..ထောတာပေါ့… ထောလဲထောတယ်…ထောင်လဲထောင်နေတယ်ဟ… ခိခိ..ဘာတွေထောင်နေတာလဲ.. ထောင်နေတာကတစ်ခုထဲပါ… အင်းလေ..အဲဒီထောင်နေတာက..ဘာလဲလို့ ကြားချ င်တယ်… ဟီးဟီးကြားချင်တာပေါ့… လီးဟေ့..လီး….ရှင်းပြီလား… အောင်မလေးတော်..ရှင်းပါပြီတဲ့ရှင်…ရှင်းပါပြီ…နားထဲမှာ စိမ့်ကနဲပဲ… အဲဒီထောင်နေတဲ့ကောင်ကို..လာလှဲပေးအုံး…. အို..ဖြစ်ပါ့မလားအဘရယ်..သူများအိမ်မှာ..ပြန်..သိ သွားယင်..ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲ.. အာ..စလောင်းက ပူနေပြန်ပြီကွာ..ငါ့..ဆရာသ္မားကလူပြိုကြီး..သူ့မိဘ..ဆွေမျိုးတွေလဲ..နယ်မှာ.. အဘနော်..ဒီအရွယ်ကြီးနဲ့တော်တော်တောင်နိုင်တယ် နော်… ဟဲ့..အားဆေးမျိုးစုံ..မှီဝဲထားပြီး..သုတ်မလွှတ်ရတာလဲ ကြာနေပြီလေ… အဲဒါနဲ့..သူများသားမယားကိုခေါ်နှိက်စက်မယ်ပေါ့… အေး..တစ်မုန်းကိုကိုလိုးပစ်မှာ… ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်…ဒီမှာ..အရည်တောင်လိုက်ချင်လာပြီ… ပြော..ဘယ်နေ့လဲ… မနက်ဖန်ခါဆို..အဆင်ပြေမလား ပြေပါ့..ကလေးကို..မူကြိုပို့ပြီးတာနဲ့လာခဲ့မယ်… ဘယ်ကိုလာရမလဲပြောအုန်းလေ… ညည်း(Y.B.S.- -)စီးလာခဲ့….(မှတ်တိုင်)မှာလာစောင့်နေ မယ်…ထွက်လာတဲ့အချိန်(ဖုန်း)ဆက်လိုက်… ဟုတ်…ရင်တွေခုန်လိုက်တာ… ။
ဒီမှာ…ကျုပ်ကသုတ်တောင်ထွက်ချင်နေပြီ… ဟင့်အင်း…မထွက်ပစ်လိုက်နဲ့…နှမြောစရာချည်း..နက်ဖန် ခါ..အတွက်မီးဖို့သိမ်းထားပေး…. အေးပါ..နောက်မှ..လမ်းလျှောက်ရတာ..ကွတကွတဖြစ် နေပြီလို့..မပြောနဲ့.. ကွပလေ့စေ..ကွချင်နေတာ.. အေး..ကွစေရမယ်…ဒါပဲနော်.. ဟုတ်..အဘ.. ဟု… ပြောပြီး..(ဖုန်း)ဆက်သွယ်မှုပြီးကြလေသည်။ (ဖုန်း)(Ringtone)သံမြည်လာသဖြင့်..ဦးသောင်းမင်း သည်…. (ဟလို)ဟု… ထူးလိုက်သည်။ အဘ..သ္မီး..ထွက်လာပြီ..လိုင်းကားမှတ်တိုင်ရောက်နေပြီ.. အေး..အဲဒါဆို..အဘလဲအခုထွက်လာပြီးတော့..(မှတ် တိုင်)မှာ..စောင့်နေမယ်..ကိုယ်ပိုင်ကား(အနီ)ရောင်ဆီလာ ခဲ့နော်..ဒါပဲ.. ဟို..ဟို..ဟာအဘကလဲ(ဖုန်း)ချသွားတာမြန်လိုက်တာ.. ယဉ်ယဉ်..စိတ်အတွင်းဝယ်..ကိုယ်ပိုင်(အနီ)ရောင်လေး.. ဟုပြောသံကြားလိုက်ရသဖြင့်..အနည်းငယ်စိတ်ရှုပ်ထွေး သွားသည်။ အင်းလေ..တော်ကြာနေ..အဘနဲ့တွေ့ရတော့မှာပဲ.. အဲဒီတော့မှမေးကြည့်ရမှာပဲ.. မကြာခင်..ဦးသောင်းမင်းပြောဆိုချိန်းချက်ထားသည့်.. ကားမှတ်တိုင်သို့..ရောက်ရှိသဖြင့်..ယဉ်ယဉ်သည်.. (Y.B.S.)ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့သည်။မှတ်တိုင်နှင့်မနီးမဝေး တွင်..ကား(အနီ)ရောင်လေးကိုတွေ့လိုက်သဖြင့်..ကားရှိ ရာသို့လျှောက်လာခဲ့သည်။ ဦးသောင်းမင်းသည်ကားအနီးတွင်..ရပ်စောင့်နေသည်။ နှစ်ဦးဆုံမိသည့်အခါ…. လာကားထဲဝင်..ညည်းမေးစရာရှိတာ..ကားပေါ်ရောက်မှ ရှင်းပြမယ်.. အဘကြိုပိတ်လိုက်သဖြင့်..ယဉ်ယဉ်လည်း..သိချင်စိတ် ကိုမြိုသိပ်ပြီး..ကားပေါ်တက်လိုက်သည်။
ကားလေးသည် မှတ်တိုင်မှညင်သာစွာထွက်ခွါလာခဲ့တော့သည်။ ဒီကားကလည်း..ငါ့ဆရာသ္မားရဲ့ကားပဲ..သုံးစရာရှိယင် ယူသုံးလို့ခွင့်ပြုထားလို့..အခုယူသုံးလိုက်တာ…. ခြံဝသို့ကားရောက်သောအခါ..အဝေးထိန်းကရိယာဖြင့်.. ခြံတံခါးဖွင့်လိုက်သည့်အတွက်..ယဉ်ယဉ်..အံ့သြရပြန် သည်။ ကားပေါ်မှဆင်းပြီး..အိမ်တံခါးဖွင့်ကာနှစ်ဦးသာားအိမ်အ တွင်းသို့..ဝင်လာကြသည်။ ညည်း..ဘာစားခဲ့ပြီးပြီလဲ အိမ်မှာထမင်းကြမ်းအစာပြေစားလာတယ်… ဧည့်ခန်းအတွင်းရှိနှစ်ယောက်ထိုင်..ဆိုဖါပေါ်ထိုင်လိုက်ကြ သည်။ဦးသောင်းမင်း..သည်ယဉ်ယဉ်ဖက်သည့်အခါ.. ခဏလေး..အဘ…သ္မီး..သိချင်တာလေးတွေမေးချင်လို့… ကဲ..မေးပါဗျာ…. အခု..ဒီတိုက်နဲ့ကားက..အဘ..အပိုင်မဟုတ်ဖူးပေါ့… အော်..ခက်ပါဘိ..ယဉ်ယဉ် ရယ်…ငါ့လိုပင်စင်စားတစ် ယောက်က..ဒါတွေကိုဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာလဲ…ငါကို အိမ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်…တစ်လ(- – – – – – )ပေး တယ်လေ..အခုတစ်နှစ်စာပေးခဲ့လို့..နင့်ကိုတောင်ငါမုန့်ဖိုး ပေးမလားလို့… ဟာ..အဘကလဲ..ပေးပေါ့…သ္မီးလဲ..အဘဆီကတောင်း ဖို့တောင်..စဉ်းစားထားတာ…. ငွေနှင့်ပက်သက်လာသောကြောင့်…ယဉ်ယဉ်တစ် ယောက်အခြားကိစ္စတွေကိုစိတ်မဝင်စားတော့ချေ။
ထို့ကြောင့်ဦးသောင်းမင်းလည်း..ယဉ်ယဉ်ကိုပွေ့ဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်လေတော့သည်။လက်ကလည်းအငြိမ် မနေ…တစ်ကိုယ်လုံးကို..ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်နေပြန်သည်။ အူး…အူး… ယဉ်ယဉ်သည်မောလာသဖြင့်.တွန်းထုတ်ရုန်းထွက်လိုက်ရ သည်။ အဘ..ကလဲ..ဧည့်ခန်းကြီးထဲမှာ… ဒီက..တံခါးပေါက်တွေအကုန်လုံးက(စတေကာ)တွေကပ် ထားတာ..အပြင်ကနေအတွင်းကိုမမြင်ရဘူးဟဲ့…. ဦးသောင်းမင်းအနည်းငယ်တင်းသွားသည်။ ဒါဆိုလဲ..အဘသိပ်ကြိုက်တဲ့နို့စို့တော့လေ… ယဉ်ယဉ်သည် ဦးသောင်းဝင်း..တင်းသွားမှန်းရိပ်မိသဖြင့် အကြောလျော့သည့်အနေဖြင့်..အပေါ်အင်္ကျီနှင့်(ဘယာစီ ယာ)ချွတ်ပေးလိုက်လေတော့သည်။ ဝင်းဝါတင်းရင်းသည့်ရင်သားအစုံကိုဦးသောင်းမင်း..ခေါင်း ထိုးကာစို့လေတော့သည်။ယဉ်ယဉ်သည် ဦးသောင်းမင်း.. ဦးခေါင်းကိုပွတ်သပ်နှစ်သိပ်ပေးနေသည်။ဦးသောင်းမင်း.. လက်သည်ပေါင်ကြားသို့ရောက်လာသဖြင့်..ယဉ်ယဉ်သည် ပေါင်ကိုအလိုက်တသိကားပေးလိုက်သည်။
ဦးသောင်းမင်း.. သည်ထမိန်ပေါ်ကနေ..အဖုတ်ကိုလက်တစ်စောင်းတိုက် သည်။နို့ကိုတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ပြောင်းစို့သည်။တဖြေးဖြေး နို့အောက်ပိုင်းဆင်းလာကာ..ဗိုက်သားကိုနမ်းသည်။ထမိန် ကိုဖြေလျော့ချကာ..အဖုတ်ကိုအတွင်းခံအပေါ်မှနမ်းသည် ဦးသောင်းမင်း..သည်ဆိုဖါပေါ်မှဆင်းကာ..ယဉ်ယဉ်၏ ခြေနှစ်ချောင်းကြား..ခေါင်းတိုးဝင်ပြီး..ပင်တီလေးကိုလှပ်၍ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကိုလျှာဖြစ်လျှက်လေသည်။စောက် ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများကိုလက်မနှစ်ဖက်အသုံးပြုပြီး..ဖြဲ၍ အဖုတ်အတွင်းပိုင်းလျှက်သဖြင့်. . အ..အ…အဘ…. ယဉ်ယဉ်သည်. ဦးသောင်းမင်း၏ဆံပင်များကိုထိုးမွမိ၏။ အစိကိုအစုပ်ခံရသောအခါ.. အိုး..အဟင့်..အဟင့်.. ဖင်ပင်ကြွတက်တက်လာသည်။ ဦးသောင်းမင်းအားပါလာသည်။ထမိန်ကိုဆွဲချွတ်လိုက် တော့သည်။လက်ကနို့နှစ်လုံးကိုလှမ်းနယ်ပြီးဘာဂျာဆက် မှုတ်သည်။ အီး…အူး…အအအို….. ထွက်.. ထွက်…ကုန်ပြီ…အ..အ…ဘရယ်…. ထွန့်ထွန့်လူးလျက်တစ်ချီပြီးခဲ့ပြီ…. ဦးသောင်းမင်းသည်မက်တပ်ထရပ်လိုက်သဖြင့်..တောင် နေသည့်လီးသည်. ယဉ်ယဉ်မျက်နှာနှင့်တစ်တည်းတည်း ဖြစ်သွားသည်။ သမီး..မမှုတ်နဲ့တော့..အဘလိုးချင်နေပြီ.. ပင်တီကိုတောင်မချွတ်တော့…ယဉ်ယဉ်၏ခြေနှစ်ချောင်း ကိုတစ်ကောက်ကွေးပေါ်တင်ကာ. အဖုတ်အတွင်းသို့လီး ကိုထိုးထည့်ရန်ကြိုးပမ်းလိုက်သည်။
အလျင်လိုနေသဖြင့် လီးကလိုရာသို့မရောက်ပေ။ယဉ်ယဉ်လည်းထန်နေပြီမို့.. လီးကိုလှမ်းကိုင်၍မို့မို့ဖေါင်းဖေါင်းလေးအဖုတ်အဝသို့တေ့ ပေးသဖြင့်…. ပင်တီဘေးမှနေ… ဗြိ..ဗြွတ်ဗြွတ်.. အသံနှင့်အတူ.. လီကြီးသည်စောက်ဖုတ်အတွင်းသားများကိုပွတ်တိုက်တိုး ဝင်လာချေတော့သည်။ ဦးသောင်းမင်းသည်..ဆိုဖါပေါ်လက်ထောက်လိုးနေရာမှ.. ယဉ်ယဉ်၏နို့အစုံကိုပြောင်းကိုင်၍ဖျစ်ညှစ်နယ်ယင်း..ဖြေး ညင်းလိုးလေတော့သည်။တခါတရံနို့သီးခေါင်းလေးများကို ခြေယင်းလိုးသည့်အခါ… အင်း….ဟင်းဟင်း…..အူး…… ဖွတ်….ဖတ်ဖတ်….ဗြွတ်……. လိုးသံ….ညည်းသံ…တို့..သံစဉ်မှန်နေသည်။ အူး….အ..အ..ပြီး..ပြီးတော့မယ်…. အခြေအနေက…တောင်းဆိုလာသည်မို့…နို့နှစ်လုံးကိုဆွဲ ဆွဲကိုင်ကာ..နာနာဆောင့်လိုးလေ၏။ အား…..အ..ဘ….ပြီးတယ်ရှင်…. ပြောလျက်..ကော့ကော့ထိုးလေသည်။ ဦးသောင်းမင်းကလည်း..အပေါ်ကနေမညှာမတာ..အတင်း ဖိကပ်ထားသည်။
ဦးသောင်းမင်းသည်နို့အုံကိုလွှတ်၍ဆိုဖါနောက်မှီကိုလက် ပြောင်းထောက်ကာ…မှန်မှန်လေးပြန်လိုးနေယင်း..သုတ် ထွက်ချင်လာသဖြင့်..ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုးလာသည့်အခါ…. အိုး…..အဘ..ဆောင့်ပါရှင့်…နာနာဆောင့်လိုးပြီး..စောက် ပတ်ထဲကို…အဘအရည်တွေပန်းထည့်လိုက်ပါတော့ရှင်.. အို့..အို့…အဟင်း….အ.အ.အူး……. လရည်ပူများအဖုတ်အတွင်းသို့..စစ်ကနဲ..စစ်ကနဲ..ဝင်လာ ချိန်တွင်… အဘ…လီးကိုမထုတ်လိုက်နဲ့အုံးနော်..သူများနောက်တစ်ခါ ပြီးချင်နေပြန်ပြီ… ပြောသဖြင့်..ဦးသောင်းမင်းသည်..ဖြေးဖြေးလေးအထုတ်/ အသွင်းလုပ်ပေးနေရသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးများကို..စို့လိုက်..လျှက်လိုက်လုပ်ပေး လိုက်သဖြင့်.. အို့အို့…ပြီးပြန်ပြီတော့…. ယဉ်ယဉ်သည်..ဦးသောင်းမင်းကျောပြင်ကို..တင်းကြပ်စွာ ဖက်လျက်..ဖင်ကော့ကော့ထိုးလေတော့သည်။ ထိုနေ့..ညနေထိ. ဧည့်ခန်း/အိပ်ခန်း/ထမင်းစားစားပွဲတို့ တွင်. နေရာစုံ..လိုးနည်းမျိုးစုံ..လိုးဖြစ်ကြသည်။ နေစောင်းလောက်မှ..ယဉ်ယဉ်ကို..ကိုယ်ပိုင်ကားလေး ဖြစ်..ယဉ်ယဉ်နေထိုင်ရာနှင့်နီးသောကားမှတ်တိုင်ထိ..ပို့ ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ယဉ်ယဉ်အမှန်တကယ်ပေါင်ကွသွားရသလို..ဦးသောင်း မင်း၏ဒစ်သည်လည်းကျိန်းတိမ်းတိမ်းဖြစ်နေတော့၏။ ဦးသောင်းမင်းသည်..ယဉ်ယဉ်နှင့်တွေ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း အခြားဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည့်အမျိုးသ္မီးများဖြင့်လည်း..ဆက် သွယ်မှုရရန်ကြိုးပမ်းလေသည်။
တနေ့..ဦးသောင်းမင်းနံက်စောစောဘုရားဝတ်ပြုပြီးချိန် တွင်..ခြံဝမှဘဲလ်တီးသံကြားသဖြင့်..မည်သူဖြစ်သနည်းဟု..အိမ်အဝလှမ်းကြည့်လိုက်ရာ….ယဉ်ယဉ်ကိုမြင်လေသည်။အဝေးထိန်းကရိယာဖြင့်. .ခြံတံခါးဖွင့်ပေးလိုက်သ ဖြင့်..ယဉ်ယဉ်ဝင်လာသည်။ ဒီကလေးမဖုန်းမဆက်ပဲဘာလာလုပ်ပါလိမ့်ဗိုက်ဖုံးအင်္ကျီ နဲ့ပါလား…. ဦးသောင်းမင်းတစ်ယောက်အတွေးတွေရှုပ်သွားသည်။ အဘ..မမြင်ဖူးတာကျနေတာပဲ… အနားသို့ရောက်သည်နှင့်..ယဉ်ယဉ်ကစကားထိုးလေပြီ။ အော်..နင်ကဖုန်းလဲမဆက်..ရုတ်တရက်ရောက်လာတာ ကိုး….. ဆက်မလို့ပဲအဘ..ရေ…ဘေလ်လဲက်ုနေ…ဆေးရုံမှာဒီ ဗိုက်ပြပြီးယင်..အဘကိုအကူအညီတောင်းပြီပြန်ပို့ပေးပါ ပြောမလို့..ဒီနားရောက်တာနဲ့မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး..ဝင် လာခဲ့တာ…အမလေးမောလိုက်တာနော်.. လို့..ပြောဆိုပြီး..ဦးသောင်းမင်းလက်မောင်းကိုတွဲကာ.. အ်ိမ်အတွင်းဝင်ရန်..ပြင်နေသဖြင့်..ဦးသောင်းမင်းခြံတံ ခါးကို..အဝေးထိန်းဖြင့်ကမန်းကတန်းပိတ်လိုက်ရသည်။ ဧည့်ခန်းတွင်းရောက်သည့်အခါ..နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖါပေါ်တွင်ထိုင်ဖြစ်ကြသည်။
ဒီဗိုက်ကိစ္စ..အဘ..မေးချင်နေတာမဟုတ်လား ယခင်ကဆိုလျှင်..ယဉ်ယဉ်အနားထိုင်မိသည်နှင့်မွေ့ဖက် ကာ..ခြေ/လက်အလုပ်များနေတတ်သော..ဦးသောင်းမင်း သည်ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေ၏။ ဒီဗိုက်ကလေ..နှယ်နှယ်ရရ..ဗိုက်မဟုတ်ဘူး..အဘရဲ့… ပိုင်ရှင်နှစ်ယောက်ရှိတဲ့ဗိုက်….တစ်ယောက်ကအိမ်က ယောင်္ကျား..ကျန်တစ်ယောက်ကဟိ…ဟိ ဟောဒီအဘ ပေါ့….. မိယဉ်နော်…ငါ့မယားနဲ့တောင်ကလေးမရတာ..ညည်း အသိ.. သိပါတယ်နော်…သိပါတယ်..တကတည်း..သူများနဲ့တွေတာနဲ့အတင်းလိုး..ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေအောင်လုပ်… ပေါင်တွေကွလာတဲ့အထိ..အဖုတ်ကြိမ်းအောင်လုပ်တဲ့လူ ကြီးက….အားဆေးတွေသောက်..အားရှိတဲ့အစားတွေ စားနေတော့..အဘလဲတစ်ဝက်ပိုင်ဆိုင်သင့်တာပေါ့… အော်….ဒီလိုလား…. ဒီလို…ဒီလို…အခု..ကလေးက..ခြေ/လက်မစုံသေးဘူး.. အဘမှာတစ်ဝက်တာဝန်ရှိတယ်…။
အဲဒီ..ကလေးမလေးဟာလေ..မပြောကောင်း/ပြောကောင်း ဒါမျိုးဆိုကျုပ်ကတာဝန်ယူပြီးသား… အဘိဆို…. အဘလီးကိုလွမ်းနေတာ…သိလား…. ပြောဆိုယင်း…ယဉ်ယဉ်ဆိုဖါအောက်ဆင်းကာ… ဦးသောင်းမင်း၏ပုဆိုးလှန်ပြီး..လီးကိုနမ်းရှိုက်လိုက်သည် ဟင်..ဘယ်ကောင်မ..နဲ့လိုးထားလဲမသိဘူး..နံစော်နေတာ ပဲ… မိယဉ်နော်… ထိုသို့..ကလူဤသို့/မြူဤသို့ဖြင့်..နှစ်ဦးသားကာမစိတ် ကို..အပြန်အလှန်နိုးဆွနေကြသည်။အရှိန်ရလာသည့်အခါ အိပ်ခန်းကုတင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိသွားကြလေတော့သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်နှင့်လိင်မှုကိစ္စမဆက်ဆံခဲ့ဖူးသော.. ဦးသောင်းမင်း..အတွက်အတွေ့အကြုံထူးဖြစ်နေသည်။ ကုတင်ပေါ်တွင်..အဝတ်အစားကင်းမဲ့လျက်..ကုတင်စွန်း တွင်..တင်ပါးတင်ကာ..ကုတင်ကိုကန့်လန့်ဖြတ်..ပက် လက်အိပ်နေသည့်..ယဉ်ယဉ်အား…. ဦးသောင်းမင်းသည်ကုတင်အောက်တွင်မက်တပ်ရပ် လျက်..ကုတင်ပေါ်လက်ထောက်၍..အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်း လေးအဝကို..ချိန်ရွယ်ကာ..မိမိ၏လီးကိုစတင်ထိုးသွင်း လိုက်လေသည်။ အင့်….အဘလိုးနေကျအတိုင်း..ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လေးလိုး ပေးပါနော်…နောက်မှနာနာညောင့်လိုးနော်…. ဖြစ်ပါ့မလားဟယ်… ဖြစ်ပါတယ်..အဘရဲ့….အိမ်ကလူတောင်..အကြီးမမွေး ကာနီးတဲ့အထိ..လိုးတာ..အဘရဲ့.. အေး…အဲဒါဆိုလဲ..လိုးပြီဟာ….။ ဤသို့ဖြင့်..ကုတင်စောင်းတွင်လိုးကြပြီးနောက်…အမော အပန်းဖြေလိုက်/ရေဆေးလိုက်… ကုတင်ပေါ်တွင်…လေးဖက်ထောက်လိုးလိုက်…. ယဉ်ယဉ်က..ဦးသောင်းမင်းတက်လိုးလိုက်ဖြင့်.. လိုးနည်းမျိုးစုံလိုးခဲ့ကြလေတော့သည်။ ဤကဲ့သို့အယုတ်ညံ့ဆုံး…ဒုသနသော..ကိုကျူးလွန်သော ဦးသောင်းမင်းသည်..မိုးကြိုးပစ်လျှင်.. ပစ်မလွဲ… ပစ်မလွဲ… ပစ်မလွဲ…ဖြစ်ချေတော့မည် ……… ပြီး။
” ဘာဖြစ်နေတာလဲ … သဲရယ် … ပြောဆိုလည်း မပြောဘူး ” ” ဟူးးးးးး …… ဘယ်လို ပြောရမှန်းတောင် မသိပါဘူး …… သော်သော်ရယ် ” မနက်အစောကြီး ထကာ အချစ်တော် သော်တာထွန်း အိမ်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဆုရတီ တယောက် သူစိမ်း ယောင်္ကျား တဦးအား ပယ်ပယ်နယ် နယ် အလိုးခံပြီး လူမှု့ရေး ဖေါက်ပြန် နေသည်ကို ပိုးရတီ အပြောရ ခက်နေ ရှာ၏။ ” ကဲ … ဒါဆိုလည်း …… ရေကူးမယ် … ထ …… အဝတ်စားလဲ ” သော်တာထွန်း စကားအဆုံး ၂ယောက်သား ရေကူး […]
အခန်းတံခါး ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ချီုအီမွှေးပျံ့နေတဲ့ အနံ့တစ်ခုနှင့်အတူ အဖြူရောင်မွှေ့ရာ ကုတင်ပေါ်မှာ တဘက်အဖြူ နံငယ်ပိုင်းလေးသာ ပတ်ထားသည့် သူ … မ… လို့ခေါ်တဲ့ သက်ထား က သူ့ကိုလက်လေးကမ်းကာ ဆီးကြိုနေသည်။မောင်… ကြာတယ်ကွာမီးပွိုင့်တွေမိနေလို့ပါ… မ…ပရယ်တီကယ်လဲရှိလို့ကျောင်းဆင်းတာလဲ နောက်ကျတယ်သူမအရှေ့မှာမတ်တပ်ရပ်လျှက်ရှိနေတဲ့ ရဲလေးကိုသက်ထားကလဲခါးကနေပွေ့ဖက်ထားသည်။မကဒီနေ့ပြန်ရောက်တာစောသားပဲအင်း …မ …စောစောပြန်ခဲ့တယ်အတန်းချိန်လဲမရှိလို့ နောက်ပြီး မောင့်… အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင်လေတကယ်လဲ… မ …က သူ့အတွက်အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဆံပင်အုံကောင်းကောင်းကြီးတွေကိုဖြန့်ချထားတဲ့… မ… ကအခါတိုင်း ကျောင်းကို လာသလိူ ဆံထုံး ထုံ့းပြီး အိနြေ္ဒကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ မဟုတ်ချေ … မ …(သက်ထား) က သူ့တို့ ဆရာမ အသက် သုံးဆယ် စွန်းရုံလေးသာရှိသေးတဲ့ ကျူတာဆရာမ တစ်ယောက်။ ရင်ဖုံး အကျီင်္ င်္လေးဝတ်ပြီး လုံချည်ကိုစင့်နေအာင်စည်းကာ စာပြတဲ့ အချိန်မျိုးဆို […]